PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: နမ့်ဆန်နယ်တွင်းရှိ တအာင်းကျေးရွာအချို့အား အစိုးရတပ်မှ ဦးတည်ပစ်ခတ်
နေပြည်တော်မှ ပေးပို့လာသော အရေးပေါ်သတင်းဖြစ်ပါသည်
အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီ ကျဆုံးရင် ကျုပ်တို့လည်း...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနက...
- ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးမြစ်ကြီး ၁၅စင်း-
အာဆီယံ နိုင်ငံများ သာမကဘဲ အာရှနိုင်ငံ များနှင့်ပါ ...
‘အထက်’ ကတဲ့လား ….
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် CPI/ACHC ကုမ္ပဏီအကြော...
ယာဆုကုနိ စစ်သည်တော်ဗိမာန်သို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် အာေ...
နာမည်ပေးထားတာလေးက လှတယ်။ " ပြည်သာ" တဲ့။ သစ်တပင်မှမ...
ပုဒ်မ ၁၈ အပါအဝင် တခြား ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်တဲ့ ပုဒ်မတေ...
ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက မြန်မာပို့စ်သတင်းဂျာနယ် သို့...
မန်စီမြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
ပအို့ ဝ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဌ ခွန်...
မြန်မာစစ်တပ် ခမရ ၁၇ ပန်ကွဲ ရွာကိုဦးတည်ပြီး လက်နက်...
ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ ပါတ်သက်လာရင် ၈၈ တွေရဲ့သမိုင်း ဘယ...
မပြောင်းလဲနိုင်သေးသော ပညာရေး မူဝါဒများကြောင့် မျာ...
ဆီးဂိမ်းအဖွင့်/အပိတ်မှာ ဒုတိယသမ္မတချင်းအတူတူ စိုင်း...
27th SEA Games: Closing Ceremony Liveနဲ့ အစအဆုံး
ပေါင်းစားနေသူတွေလည်း သတိထားကြ..... အမေစု ဒေါကန်နြေ...
ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်နှင့် ဂျပန်တက္ကသိုလ်တို့ ပူးေ...
ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်လျှင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ဒေါ်အောင်ဆ...
ကွမ်းလုံမြို့ ၌ ဗုံးပေါက်ကွဲ၍ စစ်သားတစ်ဦးနှင့် အေ...
မီးပုံးပျံကြောင့် အင်းလေး ဟူပင်ဟိုတယ် မီးလောင်
အပေါင်းသင်းကျွဲတကောင်ကို ၀င်ကယ်တင်တဲ့ သတ္တိခဲကျွဲ...
ဂျပန် နိုင်ငံဟာ တရုတ်တို့ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု ကြီးထွ...
မိတ္ထီလာအင်းဝဘဏ်ကို စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး အနုကြမ...
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာ စစ်ပညာ လုံးဝမသင်ဖူးတဲ့ အမ...
ဘယ်သူအတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလဲ ..... ??????
တပ်မတော်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက တရားခံ ဖြ...
တရုတ်၏လွှမ်းမိုးမှုကို ကန့်သတ်ရန် မြန်မာအား အကူအညီထပ...
အကွဲအပြဲသံသရာ (သို့မဟုတ်) နိဂုံးမချုပ်သေးသော မြန်မ...
လွပ်လွတ်ရေးရတာ တောင်ပေါ်ဒေသကော ပါသလား လို့မေးရမလြို...
ဂျပန် အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး နှစ် ၄၀ ပြည့် အစည်းအဝေး သမ္မတ...
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဦးလေး Jang Song Th...
ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်က ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်...
27th SEA Games Myanmar 2013 ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား အစအ...
ပဒေသရာဇ်ကိုတော်လှန်တဲ့နေ့ ၆၄ နှစ်ပြည့်
လက်​ကျန် ​နိုင်​ငံ​ရေး​အ​ကျ​ဉ်း​သား​များ ​အ​ချို့ ...
ဓါတုလက်နက် ပိတ်ပင်ရေးကို မြန်မာ အသိအမှတ်ပြုတော့မည်
အာရှမှာ စံနမူနာကောင်း ပေးသွားခဲ့....
အတုယူဖွယ် ဂျပန် ပညာရေး
တနင်္ဂနွေနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော် ဘာတွေပြောလဲ .... အချိန်ပေးပြီး...
တအောင်းဒေသတွင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်း(၉...
သင်္ဃန်းကျွန်းဆန္ဒပြပွဲကို ဖြိုခွဲဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ့ြ...
မိချောင်းကန် အပိုင်း ၁၂ ၃ မြေသိမ်းခံ ပြည်သူတို့ ဘ၀
ဦးသိန်းစိန်ပဲ မင်းသားကြီး လုပ်မှာလား
မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနသို့ တရုတ်အ...
ဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ မြန်မာအလှမယ် ဂုဏ်ရည်အေးကျော...
လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဖို့ အစိုးရဆန္ဒမရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆ...
နံက်အရုဏ်ဦးတွင် နမ့်လိတ်တောင်တိုက်ပွဲ သတင်း
" မန္တလေးဝိညာဉ် ပျောက်ဆုံးခြင်း"
TNLA တအန်းနှင့် KIA,တပ်စခန်းသို့ မြန်မာတပ်မှ အပြင်...
လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဖို့ တောင်းဆိုတာကို သမ္မတရ...
လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကို NLD ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်နောက်ပို...
နမ့်ဆန်နယ်တွင်းရှိ တအာင်းကျေးရွာအချို့အား အစိုးရတပ...
ဒေါ်စု သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်း မရှိဘူး ဆိုတဲ့သူတွေ...
နမ့်ဆန်နယ်တွင်းရှိ တအာင်းကျေးရွာအချို့အား အစိုးရတပ်မှ ဦးတည်ပစ်ခတ်
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်ည ၈နာရီကျော်လောက်ကစပြီး မြန်မာတပ်ရင်းသည် နမ့်ဆန်မြို့နားကနေမှ ပန်ရောင်ရွေးရွာ ဘက်အား လက်နက်ကြီးဖြစ် ပစ်ခက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အကြောင်းမဲ့ရွာကိုခြိမ်းခြောက်ပြီး လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာကို နားမလည်ပါဘူး အခုချိန်ထိ ၆ လုံးရှိသွားပြီ တအာင်းလက်နက်ကိုင်တွေလည်း ရွာထဲကုိုမလာတာအရမ်းကြာပြီ အခုကျတော့ ရွာကလူတွေ တောထဲပြေးတဲ့လူပြေး၊ ကလေးဆွဲသူကဆွဲ ဝရုန်းသုန်းကား ပြေးနေရတယ်’’ ဟုရွာခံတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
နမ့်ဆန်ဘက်ကနေ တောင်ရိုးဘုရားအနီးရှိ ပန်ရောက်ရွေးရွာဘက်သို့ လှမ်းပစ်သောကြောင့်ွကျည်ပေါက်ကွဲတာသံတွေနဲ့အတူ မီးရောင်တွေရှင်းနေအောင်မြင်ရသည်ဟု ၄င်းကဆက်ပြောပြခဲ့သည်။ ညမိုးချုပ်နေသည့်အတွက် တပ်ရင်းအမည်နှင့်အင်းအားကိုတော့ မသိရသေးကြောင်းဆုိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုင်ဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရီခန့်တွင်လည်း မြန်မာစစ်တပ်မှ တပ်မမှူး သက်ဇော်ဦး နှင့် နမ့်ဆန်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင် ထွန်မြတ်လေးအဖွဲ့တို့ နမ့်ဆန်မြို့နယ် အထက်မန်လွယ်ရွာကို လက်နက်ကြီး (၁၂၀ မမ)ဖြင့် ဦတည်ပစ်ခတ်ကာ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေး တိမ်ရှောင်ခံရသည်။
by Ta'ang Land
Posted by PNSjapan at 10:11 AM